हालसम्मकै उच्च २६७४.४६ विन्दुमा नेप्से, ७ अर्ब ४७ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
२०७७ चैत, २४
चैत २४, काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १५.७२ अंक अर्थात् शून्य दशमलव ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएर हालसम्मकै उच्च अर्थात् २ हजार ६७४ दशमलव ४६ विन्दुमा पुगेको हो ।
यसदिन कारोबारमा आएका २१३ ओटा कम्पनीको १ करोड ६१ लाख ८ हजार ४९९ कित्ता शेयरको ८१ हजार ७५३ पटकमा रू. ७ अर्ब ४७ करोड ७७ लाख ९५ हजार ७३८ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।
यसदिन ती कम्पनीमध्ये चार ओटा कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । युनाइटेड इदि मर्दी आरबि हाइड्रोपावर,युनिभर्सल पावर कम्पनी,चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी र चन्दागिरी हिल्स कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशका दरले वृद्धि भएको हो ।
त्यसैगरी सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका शेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू.११ हजार ७९२ मा झरेको छ ।
लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुरुपको लाभांश नआएपछि सस्तो मूल्यमा बेच्न लागेसँगै शेयर मूल्य घटेको हो । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरेर कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य ८ दशमलव ७८ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहमध्ये सबैभन्दा बढी होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक ५ शदमलव ६२ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको परिसूचक ४ दशमलव ४६ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको ३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी विकास बैंक समूहको १ दशमलव १२ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको १ दशमलव ३१ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव १३ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक २ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ ।
यसदिन सर्वाधिक भने कारोबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको भएको छ । कम्पनीको रू. ३९ करोड ८० लाख ५७ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । मंगलवार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ६०५ पुगेको छ ।
दोस्रोमा चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको कारोबार भएको छ । बजार बढेसँगै अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च दरले वृद्धि भएको छ ।
केहि समय अगाडि देखि बढ्न नसकेका हाइड्रोपावर कम्पनी र सस्तो मूल्य भएका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेसँगै लगानीकर्ता हाइड्रोपावरतर्फ आकर्षित भएको देखिएको छ ।
आरएमडीसी लघुवित्तको संस्थापक शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने आज अन्तिम दिन [२०७८ बैशाख, ८]
मेरो माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयरका लागि आव्हान गरेको बोलपत्र आज खोलिदैं [२०७८ बैशाख, ८]
श्रममैत्री कोरिडोर बनाउन उद्योगी र श्रमिक संगठनबीच सहमति[२०७८ बैशाख, ८]
वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गरिने[२०७८ बैशाख, ८]
नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघको ३६औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न[२०७८ बैशाख, ७]
दुई दिन लगातार घटेको बजार सामान्य अंकले बढ्यो, साढे ५ अर्बको शेयर कारोबार[२०७८ बैशाख, ७]
अजोड इन्स्योरेन्सको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न, दुई जना सञ्चालक निर्वाचित[२०७८ बैशाख, ७]
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य १०% ले वृद्धि, प्रतिकित्ता मूल्य २०९ पुग्यो[२०७८ बैशाख, ७]
आरएमडीसी लघुवित्तको संस्थापक शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने आज अन्तिम दिन
मेरो माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयरका लागि आव्हान गरेको बोलपत्र आज खोलिदैं